Relationship Archives » Page3of 60 » Myanmar Family Life
ချစ်သူကို နားပူနားဆာလုပ်ရင် ဖြစ်လာမယ့် ဆိုးကျိူးများ
သင့်သူငယ်ချင်းအုပ်စုထဲမှာ တစ်ချိန်လုံးပွစိပွစိနဲ့ နားပူနားဆာ လုပ်တတ်တဲ့သူရှိပါသလား။ သင့်မိသားစုထဲမှာရော အဲ့ဒီလို လူမျိုးရှိနေပါသလား။ ဒါမှမဟုတ် သင်ဟာ နားပူနားဆာလုပ်တတ်တဲ့ ချစ်သူမျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာလား။ တစ်ခုခုဆိုရင် မကျေနပ်တာတွေ၊ သဘောမကျတာတွေကို အပြစ်တင်သလို တစ်ခါမက နှစ်ခါမက နားပူနာဆာလုပ်တတ်သူတွေ ခုပြောပြပေမယ့် အရာတွေ လုပ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒီတော့ ဒီအချက်ကလေးတွကို ဖတ်ကြည့်ပြီး သင်ကိုယ်တိုင် နားပူနားဆာလုပ်တတ်သူဆိုရင်လည်း ဒီအပြုအမူတွေကို ချက်ချင်းရပ်ပစ်ဖို့ ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ မဟုတ်ရင် သင်ဟာ ခိုင်မြဲတဲ့အချစ်ရေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာ မဟုတ်လို့ပါ။
၁။ တစ်ခုခုမေးရင်၊ တောင်းဆိုရင် နှစ်ခါထက်ပိုပြောတယ်။
ကိုယ့်ချစ်သူကိုတစ်ခုခု တောင်းဆိုတဲ့အခါ နှစ်ခါထက်ပိုပြောရင် ဒါဟာ တစ်ဖက်လူကို နားပူနားဆာ လုပ်တဲ့ အနေအထားရောက်သွားပါပြီ။ သူ့ကို တစ်ခါပြော၊ မဟုတ်ရင် နှစ်ခါအထိပဲ ပြောပါ။ ဆက်တိုက်မေးနေ၊ တောင်းဆိုနေတာမျိုးက တစ်ဖက်လူအတွက် ကိုယ့်ကို စိတ်ပျက်စရာ လို့ မြင်နိုင်တဲ့ အနေအထား ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ သူ့ကို ဆက်တိုက်ပြောနေမယ့်အစား ခုဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာဖြစ်နေတာလဲဆိုတာလေး နားလည်အောင် ပြောပြပါလား၊ ဒါမှမဟုတ် ပြသနာကဘာလဲ၊ ဒါမှမဟုတ် ဒါကို ငါတို့ဖြေရှင်းနိုင်မယ်မဟုတ်လား စတဲ့ မေးခွေန်းမျိုးတွေ ပြောင်းမေးတာ ပိုသင့်တော်ပါတယ်။
၂။ နားပူနားဆာ လုပ်ခြင်းအား သူတစ်ပါးကို ထိန်းချုပ်ချင်တာမျိုးနဲ့ အတူတူပါပဲ။
တစ်စုံတစ်ယောက်ကို နားပူနားဆာလုပ်ခြင်းဟာ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာ ကိုယ်လုပ်ချင်တာကို သူ့ကိုအတင်းလုပ်ခိုင်းတဲ့ သဘောပါပဲ။ ဒီတော့ အခြားလူကို ထိန်းချုပ်ချင်တဲ့စိတ်ပိုများနေပါတယ်။ နားပူနားဆာ လုပ်ပါတယ် ဆိုမှာတော့ တောင်းဆိုတာတစ်ခုထက်ကို ပိုလာလို့ပါပဲ။
၃။ တစ်ခုခုပြောပြီဆိုတာနဲ့ နင် ဆိုတာနဲ့စတော့တာပဲ။
အချစ်ရေးတစ်ခု ခိုင်မြဲဖို့ဆိုရင် ငါက နင်က ဆိုတာထက် ငါတို့နှစ်ယောက်ဆိုတာကို ပိုသုံးသင့်လှပါတယ်။ ကိုယ့်အတွက်ပဲ ကိုယ်ကြည့်တတ်တဲ့လူဟာ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ဆိုတာကို ပြသနေတာပါပဲ။ ပိုဆိုးတာက အခြားလူကို နင်က ဘာဖြစ်တယ်၊ ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီး အပြစ်တင်တတ်တဲ့သူပါ။
၄။ ကူရာမဲ့ကယ်ရာမဲ့ ဖြစ်နေပါတော့တယ်။
ကိုယ်က ကိုယ့်ချစ်သူ ရောဂါရမှာစိုးလို့ ဆေးလိပ်မသောက်ဖို့ ပြောတယ်၊ အချိုရည်တွေ မသောက်ဖို့ပြောတယ်၊ နောက် အာလူးအချောင်းကြော်တွေ မစားဖို့ပြောတယ်ဆိုပါစို့။ ကိုယ်ကထပ်ခါ ထပ်ခါပြောတဲ့အခါသူက လိုက်လုပ်ရင် တော်သေး။ မဟုတ်ပဲ သူက ဒါတွေကိုဆက်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ သင့်အနေနဲ့ ကိုယ့်ချစ်သူက ကိုယ်ပြောတာ နားမထောင်တာကြောင့် စိတ်ထဲမှာ မကျေနပ်တာတွေ၊ ဒေါသတွေနဲ့ ကူရာမဲ့ ကယ်ရာမဲ့ ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ သူ့ကို နားပူနားဆာလုပ်မယ့်အစား ဖြေးဖြေးချင်း လျှော့ချသွားဖို့ သင့်ဘက်က ကြိုးစားရမှာပါ။
၅။ ကိုယ့်ချစ်သူအတွက် လက်တွဲဖော်လား မိဘလားဆိုတာတောင် မသဲကွဲတော့ဘူး။
ကိုယ့်ချစ်သူရည်းစားကို သူအလုပ်မဟုတ်တာ၊ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်သဘောမကျတဲ့ အချက်တွေကို မနားတမ်းဆက်တိုက်ပြောဆို နေမယ်ဆိုရင် ဒီချစ်သူက ကြာရှည်သည်းခံနိုင်မယ် မထင်ပါဘူး။ အခြေအနေက သူ့ချစ်သူလား၊ သူ့မိခင်လား ဆိုတာတောင် သူ့အနေနဲ့ ဝေခွဲရခက်လာပါလိမ့်မယ်။
၆။ နားပူနားဆာ လုပ်ခြင်းကြောင်း တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့လာတတ်ပါတယ်။
တစ်ဦးက တစ်ဦးကို နားပူနားဆာ မနားတမ်းလုပ်နေမယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီလူအပေါ် လေးစားမှုတင်မက ယုံကြည်မှုပါ ပျောက်ဆုံးလာတတ်ပါတယ်။ နောက်တစ်နည်းပြောရရင် စိတ်လည်းကုန်လာပါလိမ့်မယ်။ လူတစ်ယောက်ကို မနားတမ်း ပြောဆိုနေမှတော့ အဲ့ဒီလူအပေါ် သင်ယုံကြည်မှုမရှိတော့ဘူးဆိုတာ ပြသနေသလိုပဲပေါ့။ ဒီတော့ တစ်ဖက်လူလည်း ဒီလို ခံစားချက်မျိုး ခံစားရမှာ အသေအချာပါပဲ။ ငါ့ကိုသူ မယုံတောင်ဘူး၊ လေးစားမှုမရှိတော့ဘူးလို့ ခံစားလာရမယ်ဆိုရင် ဒါ အချစ်ရေးတစ်ခုရဲ့ အဆုံးသတ်ပါပဲ။
လွယ်လွယ်နဲ့ ပြန်မချစ်တတ်တဲ့မိန်းကလေးတွေက ဆွဲဆောင်မှုပိုရှိရခြင်း အကြောင်းအရင်း (၅)ချက်
\_လူတွေရဲ့သဘောသဘာဝက ရဖို့ခက်တာကိုမှ ပိုလိုချင်ကြတာမျိုးပါ။ ပြီးတော့ ခက်ခက်ခဲခဲ ရလာတဲ့အရာတွေ ပိုတန်ဖိုးထားတတ်ကြတာမျိုးပါ။ အချစ်ရေးမှာလည်း အတူတူပါပဲ။ ချစ်ရေးဆိုတိုင်းလွယ်လွယ်လေးလက်မခံတတ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေက ပိုဆွဲဆောင်မှုရှိကြပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ ဒီအချက်တွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
ရည်းစားစကားလာပြောတိုင်း ပြန်မကြိုက်တာဟာ ချေနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်နဲ့ကိုက်ညီမှုမရှိတဲ့သူအတွက် အချိန်မပေးချင်တာ၊ စိတ်ရှုပ်မခံချင်တာ၊ သူများအချိန်ကိုလည်း မဖြုန်းချင်တာကြောင့်ပါ။ ကိုယ်လိုချင်တာကိုကောင်းကောင်းသိတဲ့သူမျိုးဖြစ်တာကြောင့် ဆွဲဆောင်မှုရှိနေတာပါ။
(၂) ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုပိုတိုးစေတယ်
ဒီလိုမျိုး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကောင်းကောင်းသိတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်နားမှာ နေရတာဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုပိုရှိစေပြီး ပိုပျော်ရွှင်ရပါတယ်။ ဒီအချက်ကလည်း ဆွဲဆောင်မှုရှိစေတဲ့အချက်တစ်ခုပါပဲ။
(၃) ပိုပြီးကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာအောင် တွန်းအားပေးနိုင်တယ်
ဒီလိုမျိုး လူတစ်ယောက်ကိုအလွယ်လေးလက်မခံတတ်တဲ့ မိန်းကလေးကိုချစ်မိသွားတဲ့အခါ သူလက်ခံလာအောင် ကြိုးစားရင်းနဲ့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က ပိုတော်တဲ့သူတစ်ယောက်၊ အရင်ကထက်ပိုကောင်းတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းအစ၊ အရည်အချင်းကိုတိုးတက်စေတဲ့မိန်းကလေးမျိုးမို့ ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိနေတာပေါ့။
ဒီလိုမိန်းကလေးတွေဟာ လွယ်လွယ်နဲ့မချစ်တတ်ပေမယ့် ချစ်မိသွားတဲ့အခါမှာတော့ ဘယ်သူနဲ့မှမတူအောင် အချစ်ကြီးတတ်ကြတာမျိုးပါ။ သူတို့အချစ်ကိုရရင်လည်း တော်တေ်ာလေးကံကောင်းလို့ပါ။ ဒါကြောင့် ရခဲ့ရင်တော့ တန်ဖိုးထားတတ်ဖို့လိုပါတယ်။
သင့်အပေါ်သစ္စာမရှိဘဲ ခြေရှုပ်တတ်တဲ့ယောကျာ်းတွေရဲ့ အပြုအမူများ
ဒီလိုမိန်းကလေးတွေက များသောအားဖြင့် တတ်သိနားလည်တာတွေများပြီး အကြောင်းအရာတော်တော်များများကို အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးနိုင်တဲ့သူမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တာကြောင့် သူတို့နဲ့ရှိတဲ့အချိန်ဆို ပိုပြီး အဓိပ္ပါယ်ရှိလာတယ်လို့ ခံစားလာရပါတယ်။
Credit to Anty May
သင်ဟာ သူများတွေရဲ့ လိုသုံးခြင်းကို အမြဲလိုလိုခံနေရတဲ့ အကြောင်းရင်း (၅)ချက်
တစ်ခါတလေမှာ သင်ဟာလူတွေရဲ့ လိုနေတုန်းပဲ သုံးပြီးမလိုရင် လှည့်တောင်မကြည့်တော့တဲ့ လိုသုံးတစ်ယောက်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ဒီစာလေးကိုသင်ဖတ်ကြည့်သင့်ပါတယ်။ သင်ဟာ သူများတွေရဲ့ လိုသုံးခြင်းကို အမြဲလိုလို ခံနေရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ….
သင်ဟာ အရမ်းရိုးသားပြီး ပွင့်လင်းနေရင်လည်း မကောင်းတဲ့သူတွေရဲ့ လိုသုံးခြင်းကို ခံရတတ်ပါတယ်။ သင့်စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ စိတ်ကူးတွေ၊ အိပ်မက်တွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြလိုက်တဲ့အခါ မကောင်းတဲ့သူတွေက သင့်အကြံဥာဏ်ကိုယူပြီး ကောင်းစားသွားတတ်ပါတယ်။ သင့်ဦးနှောက်ကို ဖောက်စားလိုက်တဲ့သဘောပေါ့ …။
(၂) သင်ဟာ နားထောင်ပေးတတ်သူမို့လို့”
လူတွေဟာ ကိုယ့်ဂုဏ်ကိုယ်ဖော်ချင်တဲ့သူတွေများပါတယ်။ သင်ဟာ တစ်ဖက်သားပြောစကားကို ဝင်မပြောပဲ နားထောင်ပေးတတ်သူဆိုရင်တော့ သူတို့အတွက် အခွင့်ကောင်းပါပဲ။ သင့်ဆီမှာ သူတို့တော်ကြောင်း၊ တတ်ကြောင်း၊ ရှိကြောင်း ကြွားဖို့ပဲလာကြမှာပါ …။
သင်ဟာ အရာရာတိုင်းကို အကောင်းမြင်စိတ်နဲ့ ကြည့်တတ်သူပါ။ ဒါကြောင့် လူတွေရဲ့ ဆိုးကွက်ကိုမမြင်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ လူတွေအားလုံးကို လူကောင်းလို့ထင်ပြီး သင့်ကို အသုံးချလို့ချနေမှန်းတောင် မသိပဲ ဖြစ်နေတတ်တာကြောင့် မကောင်းတဲ့သူတွေကတော့ သင့်ကို လိုသုံးလို့ပဲ သဘောထားမှာ ဖြစ်ပါတယ် …။
သင်ဟာ စိတ်ရင်းကောင်းလွန်းရင်လည်း သူများတွေအတွက် လိုသုံးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ သင့်ဖက်ကတော့ သူတို့အတွက် ဘာပဲပေးရပေးရ၊ သူတို့အတွက် ဘာပဲ လုပ်ပေးရပေးရ လုပ်ပေးချင်တဲ့သူဖြစ်တဲ့ စိတ်ရင်းကောင်းသူမှန်း သိလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ သင့်ကို လိုသုံးလိုပဲ သဘောထားတော့မှာဖြစ်ပါတယ် …။
(၅) သင်ဟာ အနေအေးတဲ့သူမို့လို့”
အနေအေးတဲ့သူတွေဟာ စိတ်ရင်းမကောင်းတဲ့သူတွေရဲ့ ပစ်မှတ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ သူတို့လုပ်သမျှကို သည်းခံပြီး ဘာမှပြန်တုန့်ပြန်မယ့်သူ မဟုတ်မှန်းသိနေကြလို့ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဖက်က မတရားလုပ်ရင်တောင် ဘာမှပြန်ပြောမယ့်သူ၊ ဘာမှပြန်တုန့်ပြန်မယ့်သူမဟုတ်မှန်းသိလို့ ဖြစ်ပါတယ် …။
လိုသုံးတွေတော်တော်များများဟာစိတ်ရင်းကောင်းတဲ့သူတွေ ဖြစ်တာကြောင့် သင့်ဖက်က ဘာမှပြင်စရာမရှိပါဘူး။ လူတွေကို ယုံလွန်းတဲ့အကျင့်လေးကို ပြင်လိုက်ရင် အဆင်ပြေသွားမှာပါနော် ….။
သငျဟာ သူမြားတှရေဲ့ လိုသုံးခွငျးကို အမွဲလိုလိုခံနရေတဲ့ အကွောငျးရငျး (၅)ခကျြ
တဈျခါတလမှော သငျဟာလူတှရေဲ့ လိုနတေုနျးပဲ သုံးပွီးမလိုရငျ လှညျ့တောငျမကွညျ့တော့တဲ့ လိုသုံးတဈယောကျဖွဈနတေတျပါတယျ။ ဒါဆိုရငျတော့ဒီစာလေးကိုသငျဖတျကွညျ့သငျ့ပါတယျ။ သငျဟာ သူမြားတှရေဲ့ လိုသုံးခွငျးကို အမွဲလိုလို ခံနရေတဲ့ အကွောငျးရငျးတှကေို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ ….
သငျဟာ အရမျးရိုးသားပွီး ပှငျ့လငျးနရေငျလညျး မကောငျးတဲ့သူတှရေဲ့ လိုသုံးခွငျးကို ခံရတတျပါတယျ။ သငျ့စိတျထဲမှာရှိတဲ့ စိတျကူးတှေ၊ အိပျမကျတှကေို ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးပွောပွလိုကျတဲ့အခါ မကောငျးတဲ့သူတှကေ သငျ့အကွံဉာဏျကိုယူပွီး ကောငျးစားသှားတတျပါတယျ။ သငျ့ဦးနှောကျကို ဖောကျစားလိုကျတဲ့သဘောပေါ့ …။
(၂) သငျဟာ နားထောငျပေးတတျသူမို့လို့”
လူတှဟော ကိုယျ့ဂုဏျကိုယျဖျောခငျြတဲ့သူတှမြေားပါတယျ။ သငျဟာ တဈဖကျသားပွောစကားကို ဝငျမပွောပဲ နားထောငျပေးတတျသူဆိုရငျတော့ သူတို့အတှကျ အခှငျ့ကောငျးပါပဲ။ သငျ့ဆီမှာ သူတို့တျောကွောငျး၊ တတျကွောငျး၊ ရှိကွောငျး ကွှားဖို့ပဲလာကွမှာပါ …။
သငျဟာ အရာရာတိုငျးကို အကောငျးမွငျစိတျနဲ့ ကွညျ့တတျသူပါ။ ဒါကွောငျ့ လူတှရေဲ့ ဆိုးကှကျကိုမမွငျဖွဈတတျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ပဲ လူတှအေားလုံးကို လူကောငျးလို့ထငျပွီး သငျ့ကို အသုံးခလြို့ခနြမှေနျးတောငျ မသိပဲ ဖွဈနတေတျတာကွောငျ့ မကောငျးတဲ့သူတှကေတော့ သငျ့ကို လိုသုံးလို့ပဲ သဘောထားမှာ ဖွဈပါတယျ …။
သငျဟာ စိတျရငျးကောငျးလှနျးရငျလညျး သူမြားတှအေတှကျ လိုသုံးဖွဈတတျပါတယျ။ သငျ့ဖကျကတော့ သူတို့အတှကျ ဘာပဲပေးရပေးရ၊ သူတို့အတှကျ ဘာပဲ လုပျပေးရပေးရ လုပျပေးခငျြတဲ့သူဖွဈတဲ့ စိတျရငျးကောငျးသူမှနျး သိလိုကျတဲ့အခါမှာတော့ သငျ့ကို လိုသုံးလိုပဲ သဘောထားတော့မှာဖွဈပါတယျ …။
(၅) သငျဟာ အနအေေးတဲ့သူမို့လို့”
အနအေေးတဲ့သူတှဟော စိတျရငျးမကောငျးတဲ့သူတှရေဲ့ ပဈမှတျဖွဈတတျပါတယျ။ အကွောငျးကတော့ သူတို့လုပျသမြှကို သညျးခံပွီး ဘာမှပွနျတုနျ့ပွနျမယျ့သူ မဟုတျမှနျးသိနကွေလို့ဖွဈပါတယျ။ သူတို့ဖကျက မတရားလုပျရငျတောငျ ဘာမှပွနျပွောမယျ့သူ၊ ဘာမှပွနျတုနျ့ပွနျမယျ့သူမဟုတျမှနျးသိလို့ ဖွဈပါတယျ …။
လိုသုံးတှတေျောတျောမြားမြားဟာစိတျရငျးကောငျးတဲ့သူတှေ ဖွဈတာကွောငျ့ သငျ့ဖကျက ဘာမှပွငျစရာမရှိပါဘူး။ လူတှကေို ယုံလှနျးတဲ့အကငျြ့လေးကို ပွငျလိုကျရငျ အဆငျပွသှေားမှာပါနျော ….။
ဂေး တစ်ယောက်အဖြစ် ဝန်ခံပြီးတဲ့အခါ ရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများ
Gay တစ်ယောက်အဖြစ်၊ Bisexual တစ်ယောက်အဖြစ် ဖွင့်ချဝန်ခံပြီးတဲ့အခါ ဘာတွေရင်ဆိုင်ရမလဲ။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ ဝန်ခံလိုက်တယ်ဆိုတာ ဘဝအမှန်ကို ရှေ့ဆက်ခွင့်ပြုလိုက်ခြင်းပါပဲ။ ဖွင့်မချခင်မှာ ကိုယ့်ဘဝရဲ့လုံခြုံမှုနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ရိုက်ခတ်မှုဒဏ်တွေကို ခံနိုင်ဖို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရပါမယ်။ ဝန်ခံလိုက်တဲ့အခါ ဘဝမှာ မမျှော်လင့်ထားတဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေလည်း ရှိလာနိုင်ပါတယ်။
ဝန်ခံလိုက်တာက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပိုသိလာစေတယ်
ဝန်ခံလိုက်တယ်ဆိုတည်းက တခြားသူတွေ အမြင်ကိုဂရုမစိုက်ဘဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မလိမ်ချင်တော့တဲ့ စိတ်ကြောင့်ပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုအစစ်အမှန်ကို လေးစားလို့ပါ။ အနည်းဆုံးတော့ ကိုယ့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၊ ကိုယ့်မိသားစု၊ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းကို ဖုံးကွယ်နေရတဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုကနေ လွတ်မြောက်သွားမယ်။ ကမ္ဘာကြီးကို ကြည့်မြင်ပုံလည်း ပြောင်းသွားသလို ကမ္ဘာကြီးက ကိုယ့်အပေါ်ကြည့်မြင်ပုံလည်း ပြောင်းသွားမယ်။ အဲလိုအတွေးအမြင်တွေကပဲ တစ်ခါမှမစဉ်းစားဖူးတဲ့ ကိုယ့်အကြောင်းတွေကို ပိုသိမြင်လာစေတယ်။
ဝမ်းသာပေးတဲ့သူရှိသလို ရှုံ့ချတဲ့သူလည်း ရှိမယ်။ ပုံမှန်အတိုင်း မပြောင်းလဲဘဲ ဆက်ဆံနေသူတွေလည်း ရှိမယ်။ သေချာတာက တခြားသူတွေရဲ့တုံ့ပြန်မှုနဲ့ အပြုအမူတွေကို ထိန်းချုပ်လို့မရပါဘူး။ ဒီအခြေအနေမှာ ကိုယ့်စိတ်ကိုယ် control လုပ်ပြီး အကောင်းဆုံး ထိန်းထားနိုင်အောင်ပဲ ကြိုးစားရမှာပါ။ ဒီလိုအချိန်မှာ ကိုယ့်အပေါ်ဘယ်သူက တကယ်စိတ်ရင်းနဲ့ကောင်းလဲဆိုတာကို သိလာလိမ့်မယ်။ မကောင်းမြင်တဲ့သူတွေ အကောင်းမြင်လာဖို့လည်း ကြိုးစားမနေပါနဲ့။ အဲဒီအစား ကိုယ့်ဘဝအစစ်အမှန်ကို လက်ခံပေါင်းသင်းတဲ့ သူတွေကိုပဲ အာရုံထားလိုက်ပါ။ တကယ်လို့သင့်အပေါင်းအသင်းထဲမှာ သင့်ကိုနားလည်ပေးနိုင်လောက်တဲ့ သူငယ်ချင်းမရှိဘူးဆိုရင် အခြားLGBT အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီး သူငယ်ချင်းအသစ်ရှာပါ။
ဖွင့်ချလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ ယောက်ျားလေးချစ်သူထားကြည့်ချင်စိတ်တွေ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒါကဖြစ်တတ်တဲ့ သဘာဝပဲလေ။ ဒါပေမဲ့ ဆန္ဒမစောဖို့လိုပါတယ်။ သင်က ဖွင့်ချပြီးလို့ ယောက်ျားလေးချစ်သူရဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဆိုပေမယ့် တစ်ဖက်လူက အဆင်သင့်ဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်မှာပါ။ ပြီးတော့ မကြာသေးခင်ကမှ ဝန်ခံထားတဲ့သူတွေဆိုရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်စမ်းစစ်ဖို့ အချိန်ယူနေရပါသေးတယ်။ နောက်တစ်ခုက သင်က တည်မြဲတဲ့ relationship တစ်ခုလိုချင်တာလား၊ အပျော်တွဲချင်တာလားဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သိပါ။ ဘာလို့ဆို သင်ပေးတဲ့အတိုင်းပဲ သင်ပြန်ရမှာမလို့ပါ။
စိတ်ကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုတယ်ဆိုတာ ဘာကြောင့်လဲ။ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း ခံစားချက်မျိုးစုံ ဖြစ်လာနိုင်ချေရှိပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အပြစ်တင်မယ်၊ စိတ်တိုမယ်၊ အချည်းအနှီးဖြစ်သလိုခံစားရမယ်၊ ပျော်ရွှင်မယ်၊ စိုးရိမ်ပူပန်မယ်၊ စိတ်သက်သာရာရမယ်၊ စသဖြင့် ခံစားချက်ပေါင်းစုံဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ ဘာတွေဖြစ်နေပါစေ၊ ဒါက အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိပဲဆိုတာ သိထားပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ဘဝအသစ်ကို manage လုပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ နေသားကျသွားမှာပဲလေ။ အရာရာတိုင်းဟာ အစမှာ ခက်ခဲတယ်မဟုတ်လား။
အထက်တန်းစား၊ အောက်တန်းစား၊ အစိုခြောက်၊ အခါးခြောက် စတဲ့ ခွဲခြားသတ်မှတ်ချက်တွေက အလကားပါ။ လူအများကြိုက်တဲ့ အခြောက်ပုံစံလိုက်နေရမယ်ဆိုတာကြီးကလည်း ရေရှည်မှာ သိပ်တော့ အထာမကျပါဘူး။ ထားပါတော့ ခုခေတ်မှာ Kpop လို Gay တွေကိုကြိုက်ကြတယ်ဆိုပြီး အဲ့အတိုင်းကြီးလိုက်နေလို့ ဘာမှမထူးပါဘူး။ သင်ကသင်၊ သူတို့ကသူတို့ပဲလေ။ လူတွေရဲ့အကြိုက်ဆိုတာ အချိန်နဲ့အမျှ ပြောင်းလဲနေတာ။ ဒါကြောင့် အများကြိုက်တဲ့ ပုံစံမဟုတ်ပါဘူးလေ ဆိုပြီးတော့လည်း အုံ့ပုန်းလုပ်နေစရာ မလိုပါဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့အစစ်အမှန်ကို ပျော်ပျော်ကြီးသာ ဝန်ခံလိုက်ပါ။ ဘာသာရေးအယူအဆအရ ဒါဟာ ဝဋ်ကြောင့်ဆိုရင်လည်း ဒီဘဝမှာတင် ဖွင့်ချပြီး အကျေဆပ်သွားလိုက်ပါ။
သင့် Crush က သင့်အကြောင်း တွေးနေတယ်ဆိုတာကို ဒီလိုနည်းများနဲ့ သိရှိနိုင်…… May 22, 2019
အမြွှာလေး မွေးဖို့ အခွင့်ရေးပိုများအောင်ဘာလုပ်မလဲ May 22, 2019
စာရေးဆရာမ ခင်ခင်ထူးနဲ့ စာဖတ်ပရိသတ်တွေကို ဝန်ချတောင်းပန်ခဲ့တဲ့ အောင်ရေချမ်း May 22, 2019
စိုင်းစိုင်းနဲ့ ဘန်နီဖြိုးတို့တောင် တအံ့တသြချီးကျူးရတဲ့ ငါ့ရည်စားက ပိုမိုက်တယ်သီချင်းကို Cover Song ပြန်တီးထားတဲ့ ငဲငယ်လေးရဲ့ အမိုက်စားဗီဒီယိုဖိုင် May 22, 2019
မိန်းကလေး ပရိသတ်တွေ သဲသဲလှုပ်အားပေးခြင်း ခံနေရတဲ့ သရုပ်ဆောင်မင်းသား ၅ဦး May 22, 2019
April 2019 (667)
March 2019 (674)
February 2019 (486)
December 2018 (683)
© Myanmar Family Life 2017 - 2019
Myanmar Family Life